Yakachipa Vertical Disc Kusanganisa & Kudya kweMuchina Vatengesi uye Fekitori | YiZheng
Chii chinonzi Vertical Disc Kusanganisa feeder muchina unoshandiswa?
Iyo Vertical Disc Kusanganisa Fudzaer Muchina inonzi zvakare disc feeder. Iyo yekuyerera chiteshi inogona kudzorwa inochinjika uye iyo yekudonha huwandu inogona kugadziriswa zvinoenderana chaicho kugadzirwa kudiwa. Mutsara wekugadzira fetiraiza, iyoVertical Disc Kusanganisa feeder Machine inowanzo shandiswa pamwe chete neakawanda roller roller extrusion granulators kuti ipe kunyangwe yekudyisa zvinhu, izvo zvinowedzera zvakanyanya kugonesa kwekushandisa uye kugona kwekugadzira
Zvimiro zveVertical Disc Kusanganisa feeder Machine
Muchina uyu idiki yakatwasuka disc inosanganisa feeder, iyo inosanganisira yekusanganisa ndiro, kuburitsa chiteshi, kusanganisa ruoko, rack, gearbox uye nzira yekufambisa. Isu tinotora yakasarudzika yekupfeka chiwanikwa cheiyo yemhepo chipande kwenguva yakareba yebasa. Iyo disc inosanganisa feeder inopa kubva kumusoro uye kuburitsa kubva pasi zvine musoro mamiriro. Hunhu hwemuchina ndewekuti kuburitsa mugodhi mugumo wekudzora unotyaira inomutsa shaft huru kuti ishande, uye shaft inokonzeresa yakagadzirisa mazino anomutsa, saka shaft inokonzeresa mazino anokanganisa kusanganisa zvinhu zvakakwana uye inoita kuti zvinhu zvifambe kunze zvakaenzana. Chiteshi chekudonhedza chinogona kuvhurwa zvinoenderana nezvinodiwa kudzora kuyerera kwezvinhu zvekusimbisa kugadzirwa kwakatsetseka kweichi chiitiko chose.
Kushanda kweVertical Disc Kusanganisa feeder Machine
Icho chitsva mhando kusanganisa & yekupa michina yekuenderera kumhanya. Inonyanya kushandiswa muindasitiri yekugadzirisa indasitiri, uye isu tinopa iyo yekuchinja-kiyi hwaro fetiraiza chirongwa kutanga kubva dhizaini, kugadzira, kuisa, kugadzirisa dambudziko uye kudzidziswa kwehunyanzvi. Inogona zvakare kushandiswa mumakemikari, simbi, kuchera, zvekuvaka uye mamwe maindasitiri.
(1) Iyo Vertical Disc Kusanganisa Fudzaer Muchina ine hupenyu hurefu hwebasa, simba rekuchengetedza, diki vhoriyamu, inomhanyisa inomhanyisa kumhanya uye kuenderera kushanda.
(2) Iyo yemukati yedhisiki inogona kuvezwa neipolypropylene ndiro kana isina simbi ndiro. Hazvisi nyore kunamatira zvinhu uye kupfeka kuramba.
(3) Iyo cycloid pinwheel yokuderedza inoita kuti muchina uve nehunhu hwecompact dhizaini, inoshanda mashandiro, yunifomu kudyisa, uye nyore kubuda uye kutakura.
(4) Iyo Vertical Disc Kusanganisa Fudzaer Muchina inopa zvinhu kubva kumusoro, kuburitsa kubva pasi, zvinova zvine musoro.
(5) Kuiswa chisimbiso pakati peumwe neumwe mubatanidzwa pamusoro kwakasimba, saka muchina unomhanya mushe.
Vertical Disc Kusanganisa feeder Machine Vhidhiyo Ratidza
Vertical Disc Kusanganisa feeder Machine technical Parameter
Pashure: Screw Kubvisa Solid-mvura Separator
Zvadaro: Kuisa & Kudyisa Muchina